Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Ndị ọbịa na -eche mmachi njem ọhụụ maka Hawaii
Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Safety • Ịzụ ahịa • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Njem nlegharị anya nke Hawaii
Otu n'ime njem njem na njem nlegharị anya na United States bụ Hawaii, nke a maara dị ka Aloha Steeti. N'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 30,000 kwa ụbọchị, ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ juputara na ọrịa COVID-19 na-agbasa dị ka ọ dịtụbeghị mbụ.
Mgbochi mgbochi ọhụụ maka Hawaii (emelitere)
Hawaii anọwo na -agabiga ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke ọrịa COVID kemgbe mmalite nke ọrịa. Ọnụ ọgụgụ a dị oke elu bụ eziokwu na 60.8% nke ndị steeti na -agba ọgwụ mgbochi ọ bụla.
Nọmba ndekọ nke ndị ọbịa nọ n'ụlọ na -abata kwa ụbọchị Aloha Steeti, idebe ụlọ oriri na ọ ,ụ hotelsụ, ụlọ ahịa na ụlọ nri.
Gịnị kpatara ọtụtụ mmadụ ga -eji chọọ ịga Hawaii. Ọbụnadị ndị na -ahụ maka njem nlegharị anya na Hawaii amabeghị ma gbachie nkịtị, na -achọ ụzọ ha ga -esi mee ka ndị njem ghara ịga njem Aloha Steeti.
CỌnụ ọgụgụ ọrịa OVID dị ugbu a enweghị nchịkwa na steeti Hawaii nke US - nke a na -enyekwa nsogbu.
"Anyị kwesịrị iwetulata ọnụ ọgụgụ anyị ugbu a site na ụbọchị ọrụ, ma ọ bụghị ya, a ga -enwe mfu na -enweghị isi na ọdachi," Green kwuru na post Facebook na Instagram n'ụtụtụ a.
Gọvanọ Green Green kwughachiri site na Gọvanọ Hawaii David Ige bụ onye gosipụtara nlọghachi ihe mgbochi nwere ike ịdị na pipeline. O kwuru na enwere ike ikwuputa Fraịde. Emmachi a na -atụ anya nwere ike belata ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ kwere ka ha zukọta, na mmemme, na -anọ n'akụkụ osimiri, ụlọ nri na ụlọ ahịa.
N'ọnọdụ kachasị njọ, ọ nwere ike ịmanye ebe mmechi ọzọ.
pịa ebe a maka mmelite na ịmụta ihe Gọvanọ Ige kpebiri na usoro dị ugbu a iji wedata ọnụọgụ nje.
Nke a bụ akụkọ ọjọọ maka ụlọ ọrụ njem nlegharị anya na -abawanye ugbu a na Steeti. Mgbe emechiri maka njem mba ofesi, njem nlegharị anya nke ụlọ adịla elu ugbu a ma e jiri ya tụnyere ọnụọgụ ọnụọgụ covid.
Ọbụnadị na nnukwu mmụba nke ọnụọgụ ọrịa, ọnụ ọgụgụ ndị na -egbu ya belatara ruo ugbu a.
Na Sọnde, otu onye nwụrụ na edere ikpe 437, yana mmadụ 9 ọzọ nọ n'ụlọ ọgwụ na -ebute ọnụ ọgụgụ ụlọ ọgwụ na 2848.
Nchịkọta ọgwụ mgbochi COVID-19 kachasị ọhụrụ na Hawaii na-ekwu na e nyela ọgwụ mgbochi 1,784,678 site na mmemme nkesa steeti na nke gọọmentị etiti ruo ụbọchị Sọnde, ihe ruru 10,118 site na Fraịde. Ndị ọrụ ahụike na -ekwu na 60.8% nke ndị steeti ahụ bụ ọgwụ mgbochi ugbu a, yana 68.3% anatala opekata mpe otu ọgwụ.
Ndị ọbịa kwesịrị ịgafe Mmemme Njem Nchekwa tupu enwee ohere ịbanye Hawaii.
Harlan Accola ekwu, sị:
Ọnwa Nke Asatọ 22, 2021 na 07:41
Yabụ ị nwere otu ụdị ọrịa na -efe efe dị ka Texas nke dị nnọọ iche na mkpọchi na mkpuchi - yabụ ị chere na ọ ga -agbanwe ma ọ bụrụ na ịmalite ịmachibido? Ma eleghị anya, mmadụ kwesịrị ịghọta sayensị. Anyị na -achọ ịkagbu nnukwu njem ezinụlọ na Jenụwarị gaa Hawaii - Nke ahụ ga -akarị 20,000 n'ime akụ na ụba mpaghara - na -eche mmadụ ole ọzọ na -eche otu ihe ahụ?
Kimberly Mele ekwu, sị:
Ọnwa Nke Asatọ 13, 2021 na 00:20
Ka anyị niile bịaghachi na tebụl wee kpebie n'ozuzu ịlaghachi ịsa aka, na ịdị ọcha mana ọ kachasị karịa, na -akpachapụ anya yana idobe anya. Ọ dị mma ịmara: nweta akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ahịhịa na nri ka ị banye nri, banye n'anyanwụ ma mee mmega ahụ. Debe ibe unu n'ekpere, ka anyị chigharịkwute Chineke ndụ anyị na nsọpụrụ zuru oke nke onye ọ bụ wee rịọ Chineke onye zitere Ọkpara Ya JESUS ​​ka ọ nwụọ maka anyị, ka ọ zọpụtakwa anyị. Ọ bụrụ na anyị ga -eweda onwe anyị ala n'ihu Ya, tụgharịa n'ụzọ anyị wee chọọ ihu Ya, mgbe ahụ ọ ga -anụ ihe site n'eluigwe wee gbaghara mmehie anyị ma gwọọ ala anyị. Mmadụ nwere akụkụ ka ukwuu ọ ga -egwu n'ịdị n'otu nke Chineke. Chukwu gozie America ~ Hawaii na akụkụ ụwa niile.
Ka anyị lụso ọgụ a ọnụ!
Alla Bugriyev ekwu, sị:
Ọnwa Nke Asatọ 12, 2021 na 08:27
Mmachibido agaghị enyere aka. Emechiri Hawaii ruo ọtụtụ ọnwa ma nje ka dị. Otu dị ka nje ndị ọzọ. Agịga ma ọ bụ nkpuchi agaghị egbochi gị ịrịa ọrịa, iri nri dị mma na imega ahụ ga -arụ ọrụ ka mma… Ọ bụ ọkaibe, ọbụnadị otu ntutu agaghị adapụ n'isi gị n'enweghị ikike ya.
Rob ekwu, sị:
Ọnwa Nke Asatọ 12, 2021 na 08:19
Dabere na data ahụ, ọ bụ nghọta m nwere mmụba n'okwu ikpe Covid bụ nke kachasị n'ihi ndị bi na Hawaii na -eme njem na -emegharị ya azụ n'ụlọ.
B ekwu, sị:
Ọnwa Nke Asatọ 12, 2021 na 08:14
@ Debby - Nọrọnụ na America ?! Oge ikpeazụ m nyochara, Hawaii bụ America.